Sorona Masina ny 01/11/2018 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 01/11/2018
Izaho Joany dia nahita Anjely iray hafa, niakatra avy amin’ny fiposahan’ny masoandro, nitana ny fitombok’Andriamanitra velona ary niantso mafy an’ireo Anjely efatra nasaina hanimba ny tany aman-dranomasina, nanao hoe: “Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisinay fitomboka eo amin’ny handrin’ny mpanompon’ny Andriamanitsika”. Ary reko ny isan’izay voaisy fitomboka tamin’ny fokon’i Israely rehetra, ka efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy izy. Nanaraka izany, dia nahita vahoaka be tsy azon’olona isaina aho, avy amin’ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mbamin’ny samihafa fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana sy ny Zanak’ondry, miakanjo fotsy sy mitana sampan-drofia. Niantso tamin’ny feo mahery izy ireo nanao hoe: “An’Andriamanitra izay mipetraka eo amin’ny seza fiandrianana sy ny Zanak’ondry ny famonjena!” Dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo Anti-dahy ary ny Zava-manana aina efatra, ny Anjely rehetra, ka niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana, nitsaoka an’Andriamanitra nanao hoe: “Amen! An’Andriamanitra mandrakizay mandrakizay ny dera amam-boninahitra, ny fahendrena amam-pankasitrahana, ny haja amam-pahefana ary ny hery!” Tamin’izany ny iray tamin’ireo Anti-dahy nanao tamiko hoe: “Iza moa ireo miakanjo fotsy, ary avy aiza no niaviany?” Dia hoy ny navaliko azy: “Ianao no mahalala, Tompoko”. Ary hoy izy tamiko: “Ireo no avy tamin’ny fampijaliana lehibe, nanasa sy nanadio ny akanjony tamin’ny Ran’ny Zanak’ondry .
Tamin’izany andro izany, i Jesoa, nony nahita ny vahoaka nanaraka Azy, dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany, ka niloa-bava Izy nampianatra azy nanao hoe: “Sambatra ny mahantra am-panahy, fa azy ny Fanjakan’ny lanitra. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova ny tany. Sambatra izay mitomany, fa halàna alahelo. Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa ho voky izy. Sambatra ny mamindra fo, fa hamindrana fo izy. Sambatra ny madio fo, fa hahita an’Andriamanitra izy. Sambatra ny tia fihavanana, fa hantsoina hoe zanak’Andriamanitra izy. Sambatra ny miaritra ny fanenjehana noho ny rariny, fa azy ireo ny Fanjakan’ny lanitra. Sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina ary ampangaina lainga amin’ny ratsy rehetra noho ny amiko: mifalia sy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra”.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0928 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org